Raw Mesterolone (Proviron) mpanamboatra mpamatsy sy mpamatsy - Factory
Antsoina hoe mesterolone (Proviron) ihany koa ny poopéride steroide endogène izay nalaina am-bava. Voalohany dia niseho ho fampiasana amin'ny sehatry ny fitsaboana ao 1934 ho fampivoarana ny fampiasana zava-mahadomelina. Saingy ny mpanao biriky sy ny lehilahy manana testosterone ambany dia nahita fa tena mahasoa tokoa ao amin'ny sampan-draharahan'ny firaisana. Ny poezia Proviron dia lasa malaza kokoa amin'ny fampiasana steroid amin'ny fampiasana mpamonjy voina sy atleta hampiroborobo ny fiainana ara-pananahana.
Raw Mesterolone (Proviron) voly (1424-00-6) video
Raw Mesterolone (Proviron) vovoka (1424-00-6) Description
Raw Mesterolone (Proviron) voly, amidy eo ambanin'ny anarana hoe Proviron, ny hafa, dia fanafody androgen sy anabolic steroid (AAS) izay ampiasaina indrindra amin'ny fitsaboana ny testosterone ambany. Nampiasaina koa izy mba hanasitranana ny tsy fahampian'ny lehilahy, na dia mampiady hevitra aza izany fampiasana izany. Voasambotra izy.
Ny poofa roahin'ny Proviron dia ampiasaina amin'ny fitsaboana ny tsy fahasalaman'ny androgen amin'ny lehilahy hogogonadisma, ny anemia, ary ny fanohanana ny lahy sy ny vavy eo amin'ireo mari-pamantarana hafa. Nampiasaina koa izy io mba hanehoana ny fahamaotinana amin'ny fahatanorana amin'ny ankizilahy. Noho ny tsy fisian'ny vokatra estrogenic, ny vovobony Raw Mesterolone (Proviron) dia azo aseho amin'ny fikarakarana ny tranga misy tsy fahampiantsoan'ny androgen izay misy ny tendrony na ny gnecomastia koa. Ny zava-mahadomelina dia faritana ho androgen lefom-pahazotoana mitana ny ampahany ary tsy dia ampiasaina amin'ny tanjon'ny fitsaboana androgen, saingy mbola ampiasaina amin'ny fitsaboana.
Raw Mesterolone (Proviron) vovoka (1424-00-6) Specifications
Product Name Raw Mesterolone (Proviron) vovoka
Anarana simika Proviron, hafa
Brand Name tsy misy daty
Smiles O = C4C [[mailaka voaaro]@H] 3CC [[mailaka voaaro]@H] 2 [[mailaka voaaro]] (CC [[mailaka voaaro]] 1 (C) [[mailaka voaaro]@H] (O) CC [[mailaka voaaro]] 12) [[mailaka voaaro]@] 3 (C) [[mailaka voaaro]@H] (C) C4
Fizarana ara-batana mafy
Application Ny Proviron dia ny varotra / marika ho an'ny androgen fantatra amin'ny hoe voapoizin'i Raw Mesterolone (Proviron). Ny vokatra am-bava, ary tsy heverina ho steroid anabolic.
Inona ny Raw Mesterolone (Proviron) vovoka (1424-00-6)?
Ny Proviron, ny marika ho an'ny mesterolone, dia karazana hormonina lahy amin'ny firaisana. Ny mesterolone, fantatra amin'ny anarana hoe 1-methyl-5? -Dihydrotestosterone (DHT), dia methylated (ny fampidirana ny métiegroup -CH3) manao azy io ho steroids active, tena mitovy amin'ny DHT voajanahary izay tsy mivadika ho estrogen na progesterone (na vehivavy hormones) indray mandeha ao amin'ny vatana. Ny poezia Proviron dia manana fiantraikany tsara eo amin'ny vatana, anisan'izany ny fitomboan'ny vozona, ny fatran'ny testosterone ary ny fitondran-tena amin'ny lahy sy ny vavy.
Ahoana ny Rohva Mesterolone (Proviron) vovoka (1424-00-6) asa
Ny fampiasana vovo-dresaka ho an'ny Proviron voalohany any amin'ny tontolo ara-pahasalamana dia ny fitsaboana ny tsy fahampiana androgenic izay manjo ny taloha. Ny zava-mahadomelina koa dia ampiasaina ho fanampiana amin'ny fahavokarana ary mialoha ny dipoavatra ho an'ny lehilahy, izay mahatonga ny vovoka Proviron ho steroid tena mahasoa izay manome vokatra tsara eo amin'ny vatan'olombelona. Bilaogera sy atleta hafa koa dia mampiasa ny fahaiza-manaon'ny zava-mahadomelina mba hanampiana azy ireo hahazo ny hozatry ny diabeta ary hanatsara ny halatra hormonina testosterone.
Ny vovonan'ny Proviron dia dihydrotestosterone avy amin'ny steroide anabolika, ary io dia manova ny hormone DTH amin'ny fampiarahana ny methyl group miaraka amin'ny karbaona amin'ny toerana iray. Izany dia mahatonga ny hormonina ho tafavoaka velona amin'ny fanindroany, satria voaaro amin'ny fisarahana.
Row Mesterolone (Proviron) vovoka (1424-00-6) Dosage
Ao amin'ny tontolo ara-pahasalamana momba ny fitsaboana tsy ampy ny androgenicity, misy takelaka tokana amin'ny 25mg nalaina intelo isan-kerinandro (amin'ny totalin'ny 75mg isan'andro) dia ampiasaina amin'ny fanombohana ny fitsaboana, arahin'ny fampihenana ny doka amin'ny manaraka ny fikojakojana Takelaka 25mg tokana isan'andro. Ao amin'ny fitsaboana ny tsy fahampian'ny lahy dia mitovy ny dosage mitovy, na dia eo koa ny Proviron hafa aza ny fanafody fanafody.
Raha ny bakteria sy atleta, dia ampiasaina amin'ny 50 - 150mg isanandro ny Proviron mba hanaraha-maso ny haavon'ny Estrogen, hampihenana ny fihazonana ny rano (vokatry ny estrogen), na hampitombo ny fahavokarana aorian'ny famaranana ny tsingerina.
Na dia tsy ankatoavin'ny Proviron hampiasaina amin'ny vehivavy aza, ny vehivavy sasany ao amin'ny fiarahamonina ara-panatanjahan-tena sy birao dia mifidy hampiasa azy. Amin'io tranga io dia ampy ny dosia iray amin'ny Proviron 25mg isan'andro raha hanova ny fijerin'ny physique. Tsy tokony hatao mihoatra ny herinandro 4 - 5 izany mba hisorohana ny viriosy.
Raw Mesterolone (Proviron) poids (1424-00-6) soa
Toy ny amin'ny steroids maro anabolika dia mety ho olana mahakivy ny olana ara-pahasalamana izay toa tsy ho afa-mandeha raha tsy misy tsy misy. Ny hormonenan'ny hormones haingana sy mihetsiketsika ny zavatra niainanao nandritra ny steroids dia afaka mamela anao mihantona rehefa mahaliana ny ankamaroan'ny ao amin'ny efitrano fandriana.
Aoka ho lonaka be
Ankoatra ny fitomboan'ny testosteron, dia mihatsara be ny fiarovana ny lahy ary koa amin'ny Proviron. Nefa mazava ho azy fa tsy mampitombo ny habetsaky ny seminera ny vovony Proviron. Koa satria zavatra roa samihafa ny tsiranoka sy ny tsirilahy, dia mety ho mora aminy ny manisy ratsy azy ireo. Ny semen no tena mamolavola ny atody vavy. Etsy ankilany, ny spermia dia ny fiara izay mamela ny sambofiara hilomano mankany amin'ny tanjona farany.
Amin'ny fahazavana tsara, ny vovo-dronono avy amin'i Proviron dia afaka manampy ny olona handroso amin'ny farany ary hanomboka ny fianakaviana azy sy ny faniriany. Ny andro fiandrasana hihaino na tsia fitiliana ho an'ny bevohoka dia tsy tsara na tsy mila miandry intsony. Mety ho mora kokoa ny famokarana tsiron-jiro mahatsiravina toy ny fametrahana doka avy amin'ny Proviron amin'ny doka steroido anao.
Toy ny amin'ny steroids amin'ny anabolic, ny poofa Proviron dia manome fanafody mahafinaritra amin'ny testosterone.
Esory ny lahy
Toy ny amin'ny steroids maro androgenic, ny fampivoarana ny nono dia mety ho fiahiana goavana ho an'ny mpanao biriky. Soa ihany fa ny poezia Proviron, nanjary endrika tsy hita ny nono. Ny havesa-doko mafy sy goavam-be ihany no hita fa tsy ny fako sy ny tavy avy amin'ny lahy.
Buy Mesterolone (Proviron) vovoka avy amin'ny Buyaas.com
Ny zava-drehetra tokony ho fantatrao momba ny Proviron ho an'ny taova
De Souza, GL, & Hallak, J. (2011). Anabolic steroids sy ny tsy fahampian'ny lehilahy: fanavaozana feno. BJU international, 108(11), 1860-1865.
Angell, PJ, Green, DJ, Tompo, R., Gaze, D., Whyte, G., & George, KP (2018). Ny valin'ny karazam-pihariana mahery vaika amin'ny fanoherana amin'ny fanoherana amin'ny mpampiasa anabolic steroids: Famotorana mialoha. Science & Sports, 33(6), 339-346.
Rojo testosterone tsy misy poizina (5949-44-0)